Kutamba kwema tulips, chakavanzika chekupondwa kwaNatalia Etxano | Zvazvino Zvinyorwa
Kutamba kwema tulips inonakidza nemunyori wechiSpanish Ibon Martín Álvarez. Iri bhuku rakaburitswa mu2019 uye munguva pfupi yaive munzvimbo dzekutanga dzekutengesa, izvo zvakasimudzira zvakanyanya basa remunyori. Nhasi, Ibon inozivikanwa seimwe yeakanakisa ekutsanangudza emhando iyi, uye yave kudaidzwa kunzi: "iyo Basque tenzi yekufungira".
Chakavanzika chinotanga nekupondwa kwaNatalia Etxano, mutori wenhau akabudirira kubva kuGernika. Mhosva iyi yakafambiswa kuburikidza nekushambadzira kuburikidza nenetiweki yemagariro uye yakasvika zviuru zvemaonero, ayo zvakakatyamadza nharaunda yese. Munyori akaita nyaya yakazara chose; tsananguro yake yemuchadenga yakashambidzika, pamwe neruzivo rwekuferefetwa kwemapurisa. Kune avo chikamu, vatambi vakasiyana uye vakanyatsoita basa, nemadhirama anorukwa zvine mutsindo.
1 Pfupiso yeiyo Dhanzi yeiyo maTulips
2 Kuongorora kwekutamba kwema tulips
2.5 Nguva dzose zvakavanzika
4 Rumwe ruzivo nezve munyori: Ibon Martín Álvarez
4.1 Inofamba kuburikidza neBasque Nyika
4.2 Mavambo ekutanga
Pfupiso ye Kutamba kwema tulips
Raive zuva rakajairika chitima cheUrdaibai chakaita rwendo rwayo zvakajairika, riini, Pakarepo, mutyairi akaona chimwe chinhu chiri kure chaiko pamakwara. Sezvaakasvika, akakwanisa kunyatsoona zvazvainge zviri: zvaive mukadzi akasungwa pachigaro, aine tulip tsvuku mumaoko ake. Iye murume akabva aedza kumisa hulking muchina, asi akaziva pasi pasi kuti zvaive zvisingaite kuzviita nenguva.
Nguva pfupi isati yamhanya, mutyairi akakwanisa kuziva mukadzi ... yaive yemukadzi wake, Natalia Etxano, mutori wenhau ane mukurumbira kubva kuGernika. Pfungwa dzakarwara dzakaronga hutsinye hunotyisa dzakasiya nharembozha panzvimbo, nenjodzi iyi yaitepfenyurwa nemhenyu paFacebook. Zviuru zvevaoni zvakakwanisa kucherechedza chiitiko chisiri chemunhu ichi.
Nekuda kwezviitiko izvi, iyo Special Impact Homicide Unit inogadzirwa, kutanga kuferefeta nyaya iyi. Iri boka rakagadzirwa neiyo sub-inspector Ane Cesteno nemumwe wake Aitor Goneaga, pamwe nevamiririri Julia Lizardi, Txema Martínez uye chiremba wezvepfungwa Silvia.
Pakutanga kuferefeta, izvo zvakasarudzika zvematsotsi zvinoburitswa pachena, uye pakati pavo, izvo zviri pachena uye zvichirova: iyo tsvuku tulip uye inopenya mumaoko emunhu akabatwa, chimwe chinhu chakaoma kuwana mumatsutso. Izvi nezvimwe zvinhu zvinoratidza kuti haasi chero mhondi uye izvo pamwe auraya mhondi.
Iyi nharo inotora simba pavanowana mimwe miviri yevakadzi vane humbowo hwakafanana.. Saka inotanga kutsvaga kupokana nenguva yemurima uye inonzwisisika serial mhondi.
Analysis of Kutamba kwema tulips
Kutamba kwema tulips (2019) zvinonakidza yakatarwa kunyanya mumasipala weGernika wenharaunda yeBasque. Bhuku ine zvitsauko zvipfupi, Zvimwe zvacho ndizvo yakataurwa mumunhu wechitatu nemunyori anoziva zvese, uye vamwe mumunhu wekutanga nemumwe wevatambi vari murungano.
Ivo protagonists -nhengo ina dzechikamu chekutsvaga- akanyatsotsanangurwa, aine nyaya dzakasimba, dzinofamba uye dzinonakidza, dzisingapunyuke kubva pachazvino zviripo. Ava vanhu vane akasiyana nuances uye tsika, avo ivo vanozochinja zvishoma nezvishoma sezvo zano richienderera mberi.
Pakati pevanhu inosimbisa Ane Cesteno, uyo anoudzwa hupenyu hwake hwese. Pamwe chete naye, Julia nevamwe vamiririri vanogadzira rangano yacho. Rondedzero yaIbon inotungamira muverengi kuve chikamu chehupenyu hwavo, kusvika padanho rekuvada sekuvavenga.
Pamusoro penyaya huru yekuferefeta, mimwe misoro inopihwa. Imwe yeakanyanya kukosha ndeye mhirizhonga pabonde zvakabatana zvakananga ne kubhejera. Ivo zvakare vanomira kunze kushungurudzwa nemapurisa nehuwori, kushungurudzwa, kushungurudzwa uye kushungurudzika kwemhuri.
Chiitiko chakawanikwa nemunyori kuburikidza nekufamba kwake chinoratidzwa zvakakwana munhoroondo. Martín anotsanangura zvakadzama chiitiko chimwe nechimwe muUrdaibai; mhedzisiro mhedzisiro iri nyore uye inoyevedza panguva imwe chete, zvakanyanya zvekuti kuburikidza nekuverenga hazvisi zvakaoma kufungidzira nzvimbo dzeGernika kana Mundaka; mapopoma uye dzimwe nzvimbo.
Nguva dzose zvakavanzika
Iyo enigmatic nharaunda - Yakagadzirwa nedambudziko rinotyisa rakatsanangurwa pakutanga kwebhuku-- inochengetwa mumutsetse wega wega munyaya yacho. Iyo resolution yakajekeswa kudonha nedonhwe, izvo zvinoita kuti muverengi afarire kubva pakutanga kusvika pakupedzisira
Kutamba kwema tulips ine chiyero chakakwirira chekubvuma pawebhu: vanopfuura 85% yevaverengi vakafarira bhuku. PaAmazon chete, iro basa rine anopfuura gumi nemazana ratings, aine huwandu hwepakati mamakisi e1.100 / 4,4. Nyeredzi shanu dzinotungamira, iine 5%; nepo ratings dzisingasviki 5 nyeredzi dziri shoma, chete 57%.
Vanoda kunyumwira vachafadzwa nechikamu ichi. Iri ibasa rinomhanya-mhanya, nyowani, rinonakidza, rine mutinhimira une simba uye magumo anoshamisa. Pasina mubvunzo, yakanakisa imwe nzira yeanofadza mafeni.
Rumwe ruzivo nezve munyori: Ibon Martín Álvarez
Mutori wenhau weGipuzkoan uye munyori Ibon Martín Álvarez akazvarwa muna 1976 muguta reSan Sebastián (Nyika yeBasque), padhuze nemuganhu weFrance. Akadzidza Kutaurirana uye Kutapa nhau kuYunivhesiti yeBasque Nyika. Mushure mekupedza degree rake, akashanda kwemakore akati wandei munhepfenyuro dzakasiyana dzemuno, basa raakasanganisa nechimwe chezvaaida zvikuru: kufamba.
Inofamba kuburikidza neBasque Nyika
Hupenyu hwake hwakapidiguka apo paakafunga kutevera rimwe remaroto ake, kufamba nenzvimbo uye geography yenyika yeBasque. Zano rake raive rekufamba mazana emigwagwa munzvimbo ine nhoroondo yeEuskal Herria, zvese nzvimbo dzevashanyi nenzvimbo dzekumaruwa. Kusvitsa chishuwo chake kwakaita kuti apinze mabhuku, akatanga kunyora mabhuku nezve ake mafambiro uye mafambiro munharaunda yechiSpanish.
Nemitungamiriri iyi, Chinangwa chikuru chemunyori chave chiri chekusimudzira kushanya kunzvimbo dzine hukuru hwekushanya, asi izvo zvinozivikanwa zvishoma. Akazviwana nenzira yakapusa: akaita kurudziro dzakasiyana siyana zvichibva mukutsvaga kwake munharaunda yeBasque. Mazhinji emabhuku aya ave achikwanisika kuvonga kutsigiro ya oflvaro Muñoz.
Uye 2013, akapa rwiyo rwake rwekutanga, iyo yaakatumidza Mupata usina zita; nhoroondo yezvakaitika kumusha kwake. Kutenda kugamuchirwa kwakanaka kweiri bhuku rekutanga, gore rakatevera akaburitsa saga yeNoriki inonakidza kudana Mhosva dzeimba yechiedza (2014). Iyi nhevedzano ine mabasa mana: Iyo Mwenje weChiedza cheKunyarara (2014), Iyo Shadow Fekitori (2015), Yekupedzisira Akelarre (2016) uye Iyo Cage Yemunyu (2017).
Mushure mekubudirira kwesaga -Izvo zvinorondedzera zviitiko zvemunyori Leire Altuna-, rakaburitswa Kutamba kwema tulips (2019). Nenhau iyi yekufungidzira, munyori weBasque akakwanisa kuzviisa pakati pevanonyanya kuburitsa mhando, nekuda kwekubatana kwayakakonzera muhuwandu hwevaverengi. Uye 2021, akaenderera mberi thrillers, ne kuratidzwa kwe chinyorwa chake chazvino: Nguva yemakungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Kutamba kwema tulips
Musi wakarasika rudo